नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा संक्रमित कति थपिए कति निको भए ? – Khabar Patrika Np
नेपालमा पछिल्लो २४ घन्टामा संक्रमित कति थपिए कति निको भए ?
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ ११, २०७८ समय: २२:४८:३३
आज देशभर थप ८ हजार ६३६ जनामा को’रोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार २२ हजार ९३६ पीसीआर र ६३० जनाको एन्टीजेन परीक्षण गर्दा ८ हजार ६३६ जनामा पोजेटिभ देखिएको हो ।
थप समाचार – फिल्म ‘शुभलभ’ का नायक तथा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीलाई पि’तृशो’क परेको छ । उनका पिता रामबहादुर अधिकारीको नि’धन भएको छ । उनका बुवा केही समय देखि संक्रमित थिए । अधिकारीको सोमवार नि’धन भएको हो ।